Print Page - रुपा राना (Rupa Rana) Nepali actress
xNepali Forum => Celebrity profile => Topic started by: tundikhel on September 26, 2015, 11:36:28 PM
Title: रुपा राना (Rupa Rana) Nepali actress
Post by: tundikhel on September 26, 2015, 11:36:28 PM
कलाकार भनेको किताबको खुला पाना जस्तै हो : रुपा राना
रुपा राना नेपाली चलचित्रकी एक जमानाकी चर्चित अभिनेत्री हुन । थुप्रै चलचित्रमा नायिका र टेलिचलचित्रहरुमा विभिन्न भूमिकामा अभिनय गरेकी राना केही समयको जापान बसाईपछि अहिले नेपालमा छिन। केही समय कलाकारिता क्षेत्र बाट हराएकी उनी अहिले आक्कलझुक्कल टेलिभिजनको पर्दामा झुल्किने गरेकी छिन। अहिले उनी आफ्नो व्यवसायका साथसाथै समाजसेवामा पनि सक्रिय रहेकी छिन। यिनै नायिका रानासँग जनपुकार डटकमकी पूर्णिमा श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :-
हाल चलचित्र क्षेत्रमा देखिएको पाईदैन नि किन आफनो अनुसार भूमिका नपाएर हो की अफर नआएर हो ?
- अफर नआएर होइन, आउछ , जापानबाट फर्किए पछि पनि चार वटा जति फिल्म गरि सकेको छु । मैले आफनो स्थान त बनाइ नै सकेको छु । जस्तो पनि अफर आयो भनेर गर्ने कुरा पनि हुँदैन, चित बुझ्दो पनि हुनु प¥यो नि ।
दर्शकले अझ पनि रुपा रानालाई चलचित्रमा क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ त ?
- देख्न सकिन्छ, नदेखिने होइन हामी एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा लागि सकेपछि एउटा नशा जस्तो हुन्छ , छोड्छु भने पनि छोड्न सक्दैनौ । हामी अभिनय क्षेत्रमा नलागेको पनि यो चलचित्र क्षेत्रभित्र कुनै न कुनै क्षेत्रमा समेटिएर काम गछौ ।
नेपालमा कलाकारिता मात्र गरेर पुग्दै भनिन्छ नि ?
- मेरो विचारमा भन्नु पर्दा नेपाली चलचित्र उद्योग सानो छ ,अरु देशको तुलनामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बजार छैन त्यसैले हामी कलाकारहरु पूर्ण रुपमा डिपेन हुन सक्दैनौ । कुनै न कुनै काम गर्नु पर्छ । फेरि कलाकार भए पछि त्यही अनुसार आफूलाई मेन्टेन गर्नु पर्छ, कलाकारिता गरेर मात्र पुग्दैन ।
हाल अहिले के गदै हुनुहुन्छ ?
- मेरो एउटा पसल छ, जुन पसलमा लेडिज आइटम पाइन्छ । त्यस बाहेक केहि संघसंस्थाहरुसँग आवद्घ छु । जुन लगभग तीन वर्ष जति भयो भक्तपुरमा रहेको करुणा वृद्घाश्रममा आवद्घ भएको छ । त्यो संगै अहिले नयाँ संस्थ खोलेका
छौं त्यो हो ,नेपाली महिला चलचित्रकर्मी मञ्च ।
नेपाली महिला चलचित्रकर्मी मञ्च कस्तो खालको संस्था हो ?
- अहिले त सुरुवातमा नै छौं , चलचित्र क्षेत्रका महिलालाई मात्र समेटिनेछौं । महिला कलाकार मात्र नभएर चलचित्रसँंग सम्बन्धि महिलाहरु जस्तो महिला पत्रकार, फोटोग्राफर, निदेशक, निर्माता प्राविधिक सम्वन्धि महिलाहरुलाई लिने गरेका छौं ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महिला शोषित भएको हुन्छ र ?
- शोषित हुन्छन् डेफिनेल्ली हुन्छन, विभिन्न कुराले जस्तो पारिश्रमिकको कुरामा , फिल्म काम गर्दा कम्प्रोमाइज गरेर मात्र फिल्म काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि महिलाहरु शोषण नै भएको हुन्छ । कथा वस्तुले नमागे पनि इच्छा विपरीत अंग प्रर्दशन गर्नु पर्छ । त्यस पनि महिला नै शोषित भएको हुन्छ ।
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने कलाकारहरुलाई यसमा भविष्य छ त ?
- भविष्य देखेर नै त्यसमा लाग्ने हो तर पनि यो क्षेत्रमा मात्र लागेर आफ्नो करियर बनाउँछु भने मलाई लाग्दैन ।
तपाई किन यस क्षेत्रमा भविष्य नदेखेर नै निरन्तरता नदिएको हो ?
- फिल्म क्षेत्रमा मेरो नाम भयो, नामले मात्र त पुग्दैन नि, हामीले त्यही अनुसार मेन्टेन गर्नु पर्दछ । चलचित्रमा काम गरेर मात्र पुग्दैन ।
नेपाली चलचित्र पहिला र अहिलेको तुलनामा कत्तिको फरक पाईन्छ ?
- पहिला समयमा वर्षमा कम फिल्महरु बन्ने गथ्र्यो तर त्यो बेला गुणस्तरीय थियो विदेशी फिल्म भन्दा नेपाली फिल्म बढी रुचाउने गर्दथे, नेपाली दर्शकहरुले नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दथे तर अहिले त्यो देखिदैन । होला प्राविधिक क्षेत्रमा राम्रो भए पनि नयाँपन देखिदैन , कपी मात्र भएको पाइन्छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जति पनि कलाकारहरुले अहिले फिल्ममा बेडसिन दिइएको पाईन्छ । यो आवश्यक कि अनावश्यक हो ?
- कथामा वेडसिन छ भने त्यसलाई त्यसलाई राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । राख्नु जरुरी हुन्छ, त्यसलाई अनावश्यक भन्न मिल्दैन। तर कतिपय चलचित्रहरु फिल्म चलाउने हिसावले पनि फोकस मात्र गरेको पाइन्छ, यो अनावश्यक लाग्छ ।
नेपाली चलचित्र अब कस्तो हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
- नेपाली चलचित्रमा नेपाली मौलिकता झल्किनु पर्दछ, नेपालीपन ,समय सान्दर्भिक कथा वस्तुमा आधारित हुनुपर्दछ । नेपालमा यति धेरै संस्कार संस्कृतिहरु छन् विदेशी चलचित्रको नक्कल गर्नु आवश्यक पदैन ।
कलाकार भएपछि कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
- कलाकार भएपछि आफ्नो प्राइवेसी भन्ने नै हुँदैन, कलाकार भनेको किताबको खुल्ला पाना जस्तै हो जसले पनि पढ्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले केहि गर्नु भन्दा अगाडि दश पटक सोच्नु पर्दछ , सानो कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
source - Janapukar